FITAZONANA OLONA AN-KERINY : Lehilahy iray teratany frantsay nafenin’ny sakaizany an-tsokosoko
Tranga iray hafahafa indray no niseho tao amin’ny Kaominin’Antanamitaraina Distrikan’Antsiranana II , afak’omaly. 18 janvier 2018
Lehilahy iray teratany frantsay antsoina hoe “Bernard Charles” 75taona no nafenina an-tsokosoko tao an-trano. Araka ny loharanom-baovao voaray avy amin’ny mpitandro filaminana dia fantatra fa i Mourina Mahmoudou no nanidy azy io an-keriny tao an-tranony nandritra ny andro maromaro.
Tamin’ny fanadihadiana rehetra natao dia voalaza fa sakaizany ity ramatoa nanafina azy ity. Noho ny tsy fahitan’ny havany ity lehilahy ity tamin’ny andro maromaro dia nampandre ny mpitandro filaminana izy ireo ka nanomboka teo ny fikarohana. Nidina tany an-toerana avy hatrany ny zandary tamin’izany ka tratra tao amin’ilay trano izay fantatra fa nanafenana ity rangahy ity ilay ramatoa voalaza etsy ambony. Raikitra ny savahao ka sarona tao tokoa ity vazaha lahy ity.
Avy hatrany dia naterina teny amin’ny kaonsilin’i Frantsa” tao an-toerana itsy farany ka avotra soa aman-tsara ihany ny ainy ary salama tsara izy. Nandray fepetra hentitra ny tompon’andraikitra teo anivon’ny Zandary taorian’izay tranga izay ka efa notazomina ity nahavanon-doza sy ny olona iray niaraka nitsikombakomba taminy.
Nahitana zaza sampona toka-maso ILAKA EST- VATOMANDRY (431) 20 février 2018 Nandositra rehefa nosakanan’ny mpitandro filaminana FIARA DUSTER NAMPIAHIAHY (407) 20 février 2018 Olona 7 namoy ny ainy, 8 naratra mafy, trano 3 potika FIANJERANA VATO TENY AMPAMARINANA (384) 19 février 2018 « Ho firenena mandroso indrindra aty Afrika i Madagasikara » ANDRY RAJOELINA (351) 19 février 2018 Ravan’ny polisy ny tambajotrana andian-jiolahy HALATRA MOTO AO TOAMASINA (229) 19 février 2018 Nodimandry ny minisitry ny Filaminana anatiny teo aloha Organès Rakotomihantarizaka FAHAFATESANA TAMPOKA (212) 22 février 2018